Adidas တံဆိပ်ကို ကမ္ဘာကျော်စေခဲ့တဲ့ Boost နည်းပညာကို အချက်ကျကျလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ
19 Jun 2018 . 11:06 AM
အားကစားလောကနဲ့ ဖက်ရှင်လောကတို့မှာ Adidas brand လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့3Stripes လိုင်းသုံးလိုင်းကို အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြပါတယ်။ အဲဒီ3Stripes လိုင်းသုံးလိုင်းဟာ Adidas ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်သလို မူပိုင်သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်အထိ ဖိနပ်လောကမှာ Adidas လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ရှေးကျပြီးဂန္တဝင်ဆန်တဲ့3Stripes လိုင်းသုံးလိုင်းကိုပဲ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Adidas အမှတ်တံဆိပ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Stan Smith, Superstar အစရှိတဲ့ ဖိနပ်တွေဟာလည်း နာမည်ကျော်ဖိနပ်မော်ဒယ်တွေဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ လက်ရှိမျက်မှောက်ခေတ်ဈေးကွက်မှာ အားလုံးနဲ့ပုခုံးချင်းယှဉ်ပြီး ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်မယ့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဖန်တီးချပြဖို့ Adidas အနေနဲ့ လိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်
ဒါကြောင့်ပဲ Boost နည်းပညာဟာ မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ အဲဒီမှာစပြီး သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးက ကျွမ်းကျင်သူပေါင်းများစွာဟာ Boost နည်းပညာကို စတင်ဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အားလုံးသိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ Adidas ရဲ့ Boost နည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုထူးခြားချက်နဲ့ ဖန်တီးထားလဲ? ဘယ်လိုမျိုး သူမတူတဲ့အရည်အသွေးတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ လက်မထောင်နိုင်ခဲ့တာလဲ? အစရှိတာတွေကို အားလုံးဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဒီပို့စ်မှာ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို တစ်ပုံချင်းစီထောက်ပြီး ဖတ်ရှုပေးကြပါဦး
Boost နည်းပညာကို ဖိနပ်အတွင်းထည့်သွင်းဖို့ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
Adidas အနေနဲ့ ဥရောပတိုက်တစ်လွှားကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စီးပွားပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Nike ဟာ အမေရိကန်ဖိနပ်ဈေးကွက်ကို ချူပ်ကိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Adidas အမှတ်တံဆိပ် အားကစားဖိနပ်တွေ၊ အပြေးဖိနပ်တွေနဲ့ နေ့စဉ်စီးနင်းနိုင်တဲ့ဖိနပ်တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေ ဝတ်ဆင်ကြတာမှန်ပေမယ့် အမေရိကန်ဈေးကွက်ကိုမင်းမူထားတဲ့ Nike ဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာလည်း နှာတစ်ဖျားသာလို့နေခဲ့ပါတယ်။ အားကစားနယ်ပယ်နဲ့ ဖက်ရှင်နယ်ပယ်တို့မှာတင်မကဘဲ Puma တို့လို့ Under Armour တို့လို အခြားပြိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီတွေလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် Adidas အနေနဲ့ ဈေးကွက်ကိုပြန်လည်ထိုးဖောက်ဖို့နဲ့ ရှေ့ကဦးဆောင်ဖို့အတွက် သူမတူတဲ့အရည်အသွေးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ထုတ်ကုန်သစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးချပြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာစပြီး ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းလိုက်တိုင်းမှာ အဆုံးမဲ့တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပေးစွမ်းတဲ့ Boost ဆိုတဲ့ နည်းပညာကို စတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ပထမဦးဆုံးပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ Energy Boost နဲ့ Adidas ရဲ့ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှု
Ultraboost, Pure Boost အစရှိတဲ့ ဖိနပ်တွေ မထွက်ရှိသေးခင်မှာ Adidas ဟာ Energy Boost ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Boost နည်းပညာထည့်သွင်းထားတဲ့ ဖိနပ်တွေကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ Energy Boost ဖိနပ်တွေကို အားလုံးလက်ထဲအရောက်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ဖိနပ်ရဲ့သွင်ပြင်ဒီဇိုင်းနဲ့ တစ်သားတည်းကျမှု၊ အဆုံးမဲ့စွမ်းအင်ပေးစွမ်းမှု၊ ခြေနင်းအထောက်အပံ့နဲ့ တာရှည်အကြမ်းခံနိုင်မှု အစရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတွေကြောင့် ထွက်ရှိပြီး အချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ Adidas ရဲ့ Boost ဖိနပ်တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဟိုးလေးတစ်ကျော်ပေါက်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ Adidas က တီထွင်လိုက်တဲ့ ဒီ Boost နည်းပညာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အားကစားသမားတွေနဲ့ ကိုယ်ကာယသမားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ရှုထောင့်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသလိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ကောင်းသတင်း လူချင်းဆောင်ဆိုသလို ခုနှစ်အလိုက် ရောင်းအားတွေတစ်မဟုတ်ချင်း ထိုးတတ်လာခဲ့တာပါပဲ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကထိ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဈေးကွက်ရောင်းအား ၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရာကနေ ၂၀၁၅ အရောက်မှာ အရောင်းအားသိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတဲ့အထိ Boost နည်းပညာဟာ Adidas အမှတ်တံဆိပ်ကို ပြန်လည်အသက်ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးထဲက ကွဲထွက်ပြီးထူးခြားနေတဲ့ Adidas ရဲ့ Boost နည်းပညာကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါ
Adidas ကပညာရှင်တွေဟာ ခြေတစ်ချက်နင်းလိုက်တိုင်းမှာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့စွမ်းအင်ကို တန်ပြန်အားအဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲပေးမယ့် နည်းပညာမျိုးကို ဖိနပ်အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အသုံးပြုတဲ့ EVA ရော်ဘာကွန်ပေါင်း Midsole ဖော်မျူလာ (အယ်လ်သလိန်းဟိုက်ဒရိုကာဗွန်နဲ့ အက်စီတိတ်ဓာတုဒြပ်ပေါင်း) ဟာ ခြေနင်းကူရှင်တန်ပြန်မှုနဲ့ ထောက်ပံ့မှုကို ပေးစွမ်းပေမယ့်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်မားမှုနဲ့ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့ကျသွားတတ်တာကြောင့် အဲဒီဖော်မျူလာကို ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ မဆိုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဇွဲမလျှော့တဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်နည်းလမ်းရှာဖွေမှုတို့ကြောင့် Adidas ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဓာတုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik) နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အနာဂတ်မှာ Boost ဖြစ်လာမယ့် ဖော်မျူလာကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ BASF ဟာ Adidas ရဲ့နှစ်ဟောင်းပါတနာဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်ကတည်းက ဖိနပ်နည်းပညာသစ်တွေ ဖန်တီးဖို့နဲ့ အဖြေရှာဖို့အတွက် အကျိုးတူပူးပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Boost နည်းပညာဆိုပြီးဖြစ်လာစေတဲ့ အဓိကအရာကတော့ ညီမျှတဲ့တန်ပြန်အားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ TPU Midsole ဖော်မျူလာ (သာမိုပလက်စတစ်နဲ့ ပေါ်လီယူရသိန်းဓာတုဒြပ်ပေါင်း) ဖြစ်ပြီး ဖိနပ် Midsole မှာ ရာနဲ့ချီတဲ့ Energy Capsules ပေါင်းများစွာကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပေါင်းစည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတုဗေဒနဲ့ သိပ္ပံသဘောတရားတို့ရောယှက်နေတဲ့ Boost နည်းပညာကြောင့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအပြေးဖိနပ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Ultraboost ဖိနပ်
Adidas ရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတို့ရဲ့ အသီးအပွင့်ရလဒ်ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ခေါ်တွင်ကြတဲ့ Boost နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ Boost နည်းပညာဆိုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် Adidas ဟာ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းပြီး စမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နည်းပညာတွေရဲ့ အံ့မခန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် Adidas ရဲ့ Ultraboost ဖိနပ်ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအပြေးဖိနပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Boost နည်းပညာဟာ ဓာတုဗေဒအချိုးအဆတွေနဲ့ သိပ္ပံပညာသဘောတရားတွေကို ရောယှက်ပြီး လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကွက်လပ်တစ်နေရာကို ဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ အရည်အသွေးမြင့်ဖိနပ်တစ်ရံဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောက်ဆိုရင် Adidas ရဲ့ Boost နည်းပညာ ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်၊ ဘယ်လောက်ထိအရည်အသွေးမြင့်ကြောင်းနဲ့ ဘာကြောင့်လူကြိုက်များသလဲဆိုတာ အားလုံးသိရှိသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Adidas ရဲ့ Boost ဖိနပ်တွေမှာ ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေပါလဲလို့ မေးလာခဲ့ရင် ဒီအချက်လေးတွေကို ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါ။
အခြားတန်ဖိုးကြီး အထက်တန်းစားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က Adidas ဖိနပ်တွေဟာ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာမဆို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်စီးနင်းနိုင်တာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ နောက်တစ်ချက်ဖြည့်စွက်ချင်တာကတော့ Adidas အမှတ်တံဆိပ်မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်လိုတံဆိပ်ကိုမဆို မှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူမှသာ သူတို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ အံ့မခန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ခံစားနိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘယ်လိုနာမည်ကျော်ထုတ်ကုန်မဆို ဒီဇိုင်းကြောင့်၊ ပါဝင်ပစ္စည်းကြောင့်၊ ဖန်တီးထားတဲ့နည်းပညာကြောင့်ရယ်လို့ သက်သက်ကြီး ဈေးနှုန်းမြင့်နေတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ အဲဒီလိုထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတွေကို တစ်စုတစည်းတည်းပေါင်းစည်းပြီး ဘက်ပေါင်းစုံပြီးပြည့်စုံတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် အားလုံးဆီအရောက်ပို့ပေးထားလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခု ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ထပ်ပြီးလည်း အခွင့်သင့်ရင်သင့်သလို အခုလိုမျိုးပို့စ်လေးတွေကို ပေ့ခ်ျမှာတင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ Adidas ချစ်သူများအားလုံး သာယာတဲ့နေ့လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Adidas တံဆိပျကို ကမ်ဘာကြျောစခေဲ့တဲ့ Boost နညျးပညာကို အခကျြကကြလြလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ
အားကစားလောကနဲ့ ဖကျရှငျလောကတို့မှာ Adidas brand လို့ဆိုလိုကျတာနဲ့3Stripes လိုငျးသုံးလိုငျးကို အရငျဆုံးပွေးမွငျကွပါတယျ။ အဲဒီ3Stripes လိုငျးသုံးလိုငျးဟာ Adidas ရဲ့ထငျရှားတဲ့အမှတျအသားဖွဈသလို မူပိုငျသင်ျကတေလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈလောကျအထိ ဖိနပျလောကမှာ Adidas လို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ ရှေးကပြွီးဂန်တဝငျဆနျတဲ့3Stripes လိုငျးသုံးလိုငျးကိုပဲ လကျဆုပျလကျကိုငျပွစရာရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Adidas အမှတျတံဆိပျကို ကိုယျစားပွုတဲ့ Stan Smith, Superstar အစရှိတဲ့ ဖိနပျတှဟောလညျး နာမညျကြျောဖိနပျမျောဒယျတှဖွေဈတာမှနျပမေယျ့ အခြိနျတှကွောလာတာနဲ့အမြှ လကျရှိမကျြမှောကျခတျေဈေးကှကျမှာ အားလုံးနဲ့ပုခုံးခငျြးယှဉျပွီး ထိပျဆုံးကရပျတညျမယျ့ ထုတျကုနျတဈခုကိုဖနျတီးခပြွဖို့ Adidas အနနေဲ့ လိုအပျလာခဲ့ပါတယျ
ဒါကွောငျ့ပဲ Boost နညျးပညာဟာ မှေးဖှားခဲ့တယျလို့ဆိုရမှာပါ။ အဲဒီမှာစပွီး သကျဆိုငျရာပညာရှငျတှနေဲ့ နယျပယျအသီးသီးက ကြှမျးကငျြသူပေါငျးမြားစှာဟာ Boost နညျးပညာကို စတငျဖနျတီးခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ အားလုံးသိနပွေီးသားဖွဈတဲ့ Adidas ရဲ့ Boost နညျးပညာဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယျလိုထူးခွားခကျြနဲ့ ဖနျတီးထားလဲ? ဘယျလိုမြိုး သူမတူတဲ့အရညျအသှေးတှကွေောငျ့ ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျမှာ လကျမထောငျနိုငျခဲ့တာလဲ? အစရှိတာတှကေို အားလုံးဗဟုသုတဖွဈဖှယျ ဒီပို့ဈမှာ ပွနျလညျတငျဆကျပေးသှားမှာပါ။ စိတျဝငျစားတယျဆို တဈပုံခငျြးစီထောကျပွီး ဖတျရှုပေးကွပါဦး
Boost နညျးပညာကို ဖိနပျအတှငျးထညျ့သှငျးဖို့ စတငျအကောငျအထညျဖျောခွငျး
Adidas အနနေဲ့ ဥရောပတိုကျတဈလှားကို အတိုငျးအတာတဈခုထိ ထိုးဖောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဆယျစုနှဈပေါငျးမြားစှာ စီးပှားပွိုငျဖကျဖွဈတဲ့ Nike ဟာ အမရေိကနျဖိနပျဈေးကှကျကို ခြူပျကိုငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ Adidas အမှတျတံဆိပျ အားကစားဖိနပျတှေ၊ အပွေးဖိနပျတှနေဲ့ နစေ့ဉျစီးနငျးနိုငျတဲ့ဖိနပျတှကေို တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူတှေ ဝတျဆငျကွတာမှနျပမေယျ့ အမရေိကနျဈေးကှကျကိုမငျးမူထားတဲ့ Nike ဟာ ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျမှာလညျး နှာတဈဖြားသာလို့နခေဲ့ပါတယျ။ အားကစားနယျပယျနဲ့ ဖကျရှငျနယျပယျတို့မှာတငျမကဘဲ Puma တို့လို့ Under Armour တို့လို အခွားပွိုငျဖကျကုမ်ပဏီတှလေညျး ရှိနတေဲ့အတှကျ Adidas အနနေဲ့ ဈေးကှကျကိုပွနျလညျထိုးဖောကျဖို့နဲ့ ရှကေ့ဦးဆောငျဖို့အတှကျ သူမတူတဲ့အရညျအသှေးနဲ့ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ ထုတျကုနျသဈတဈခုကို ဖနျတီးခပြွဖို့လိုအပျလာပါတယျ။ အဲဒီမှာစပွီး ခွတေဈလှမျးလှမျးလိုကျတိုငျးမှာ အဆုံးမဲ့တဲ့စှမျးအငျနဲ့ တနျပွနျအကြိုးသကျရောကျမှုကို ပေးစှမျးတဲ့ Boost ဆိုတဲ့ နညျးပညာကို စတငျဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ ပထမဦးဆုံးပှဲထှကျလာခဲ့တဲ့ Energy Boost နဲ့ Adidas ရဲ့ဈေးကှကျထိုးဖောကျမှု
Ultraboost, Pure Boost အစရှိတဲ့ ဖိနပျတှေ မထှကျရှိသေးခငျမှာ Adidas ဟာ Energy Boost ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ Boost နညျးပညာထညျ့သှငျးထားတဲ့ ဖိနပျတှကေို ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျနဲ့ မိတျဆကျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာတော့ Energy Boost ဖိနပျတှကေို အားလုံးလကျထဲအရောကျပို့နိုငျခဲ့ပွီး ဖိနပျရဲ့သှငျပွငျဒီဇိုငျးနဲ့ တဈသားတညျးကမြှု၊ အဆုံးမဲ့စှမျးအငျပေးစှမျးမှု၊ ခွနေငျးအထောကျအပံ့နဲ့ တာရှညျအကွမျးခံနိုငျမှု အစရှိတဲ့ ထူးခွားတဲ့အရညျအသှေးတှကွေောငျ့ ထှကျရှိပွီး အခြိနျအနညျးငယျအကွာမှာပဲ Adidas ရဲ့ Boost ဖိနပျတှဟော တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ဟိုးလေးတဈကြျောပေါကျမွောကျသှားခဲ့ပါတယျ။ နောကျထပျတဈခကျြကတော့ Adidas က တီထှငျလိုကျတဲ့ ဒီ Boost နညျးပညာရဲ့ စှမျးဆောငျရညျဟာ အားကစားသမားတှနေဲ့ ကိုယျကာယသမားတှရေဲ့ လိုအပျခကျြရှုထောငျ့ကို ဖွညျ့ဆညျးပေးသလိုဖွဈသှားခဲ့တဲ့အတှကျ ကောငျးသတငျး လူခငျြးဆောငျဆိုသလို ခုနှဈအလိုကျ ရောငျးအားတှတေဈမဟုတျခငျြး ထိုးတတျလာခဲ့တာပါပဲ။ ၂၀၁၃ ခုနှဈတုနျးကထိ အမရေိကနျနိုငျငံအတှငျးမှာ ဈေးကှကျရောငျးအား ၂ ရာခိုငျနှုနျးပဲရှိရာကနေ ၂၀၁၅ အရောကျမှာ အရောငျးအားသိသိသာသာမွငျ့တကျလာခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျမှာဆိုရငျ ၉ ရာခိုငျနှုနျးဖွဈသှားတဲ့အထိ Boost နညျးပညာဟာ Adidas အမှတျတံဆိပျကို ပွနျလညျအသကျဝငျစခေဲ့ပါတယျ။
အားလုံးထဲက ကှဲထှကျပွီးထူးခွားနတေဲ့ Adidas ရဲ့ Boost နညျးပညာကို အသေးစိတျခှဲခွမျးစိတျဖွာကွညျ့တဲ့အခါ
Adidas ကပညာရှငျတှဟော ခွတေဈခကျြနငျးလိုကျတိုငျးမှာ ကုနျဆုံးသှားတဲ့စှမျးအငျကို တနျပွနျအားအဖွဈ ပွနျလညျပွောငျးလဲပေးမယျ့ နညျးပညာမြိုးကို ဖိနပျအတှငျးမှာ ထညျ့သှငျးဖို့ကွိုးပမျးနတော ၁၉၈၀ ပွညျ့နှဈကတညျးကဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက အသုံးပွုတဲ့ EVA ရျောဘာကှနျပေါငျး Midsole ဖျောမြူလာ (အယျလျသလိနျးဟိုကျဒရိုကာဗှနျနဲ့ အကျစီတိတျဓာတုဒွပျပေါငျး) ဟာ ခွနေငျးကူရှငျတနျပွနျမှုနဲ့ ထောကျပံ့မှုကို ပေးစှမျးပမေယျ့လညျး ပတျဝနျးကငျြအပူခြိနျမွငျ့မားမှုနဲ့ ပွငျးထနျလှနျးတဲ့ဖိအားတှနေဲ့ ကွုံတဲ့အခါ စှမျးဆောငျရညျလြှော့ကသြှားတတျတာကွောငျ့ အဲဒီဖျောမြူလာကို ပွီးပွညျ့စုံတယျလို့ မဆိုနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဇှဲမလြှော့တဲ့ တီထှငျဖနျတီးမှုနဲ့ စဉျဆကျမပွတျနညျးလမျးရှာဖှမှေုတို့ကွောငျ့ Adidas ဟာ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးဓာတုကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈတဲ့ BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik) နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး အနာဂတျမှာ Boost ဖွဈလာမယျ့ ဖျောမြူလာကို ဖနျတီးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ BASF ဟာ Adidas ရဲ့နှဈဟောငျးပါတနာဖွဈပွီး လှနျခဲ့တဲ့ ၂၅ နှဈကတညျးက ဖိနပျနညျးပညာသဈတှေ ဖနျတီးဖို့နဲ့ အဖွရှောဖို့အတှကျ အကြိုးတူပူးပေါငျးထားတာဖွဈပါတယျ။ Boost နညျးပညာဆိုပွီးဖွဈလာစတေဲ့ အဓိကအရာကတော့ ညီမြှတဲ့တနျပွနျအားကိုဖွဈပျေါစတေဲ့ TPU Midsole ဖျောမြူလာ (သာမိုပလကျစတဈနဲ့ ပျေါလီယူရသိနျးဓာတုဒွပျပေါငျး) ဖွဈပွီး ဖိနပျ Midsole မှာ ရာနဲ့ခြီတဲ့ Energy Capsules ပေါငျးမြားစှာကို တဈစုတဈစညျးတညျး ပေါငျးစညျးပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
ဓာတုဗဒေနဲ့ သိပ်ပံသဘောတရားတို့ရောယှကျနတေဲ့ Boost နညျးပညာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးအပွေးဖိနပျဖွဈလာခဲ့တဲ့ Ultraboost ဖိနပျ
Adidas ရဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာကွိုးစားအားထုတျမှုနဲ့ တီထှငျဖနျတီးမှုတို့ရဲ့ အသီးအပှငျ့ရလဒျကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ချေါတှငျကွတဲ့ Boost နညျးပညာပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလိုပွီးပွညျ့စုံတဲ့ Boost နညျးပညာဆိုပွီး ဖွဈပျေါလာဖို့အတှကျ Adidas ဟာ ခုနှဈသက်ကရာဇျပေါငျးမြားစှာဖွတျသနျးပွီး စမျးသပျမှုပေါငျးမြားစှာ ပွုလုပျခဲ့ရပါတယျ။ ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားတဲ့နညျးပညာတှရေဲ့ အံ့မခနျးစှမျးဆောငျရညျကွောငျ့ Adidas ရဲ့ Ultraboost ဖိနပျဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးအပွေးဖိနပျအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရပါတယျ။ Boost နညျးပညာဟာ ဓာတုဗဒေအခြိုးအဆတှနေဲ့ သိပ်ပံပညာသဘောတရားတှကေို ရောယှကျပွီး လူတှရေဲ့လိုအပျခကျြကှကျလပျတဈနရောကို ဖွညျ့စှကျပေးတဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ဖိနပျတဈရံဖွဈပါတယျ။ အခုလောကျဆိုရငျ Adidas ရဲ့ Boost နညျးပညာ ဘယျလိုဖွဈလာတယျ၊ ဘယျလောကျထိအရညျအသှေးမွငျ့ကွောငျးနဲ့ ဘာကွောငျ့လူကွိုကျမြားသလဲဆိုတာ အားလုံးသိရှိသှားလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ ဒီတော့ ဒျေါလာ ၃၀၀ ဝနျးကငျြတနျဖိုးရှိတဲ့ Adidas ရဲ့ Boost ဖိနပျတှမှော ဘယျလိုထူးခွားခကျြတှပေါလဲလို့ မေးလာခဲ့ရငျ ဒီအခကျြလေးတှကေို ပွနျမြှဝပေေးလိုကျပါ။
အခွားတနျဖိုးကွီး အထကျတနျးစားလူသုံးကုနျပစ်စညျးတှနေဲ့ မတူတဲ့အခကျြက Adidas ဖိနပျတှဟော ဘယျအခြိနျ၊ ဘယျနရောမှာမဆို ကိုယျ့စိတျကွိုကျစီးနငျးနိုငျတာပါပဲ။ ဒီနရောမှာ နောကျတဈခကျြဖွညျ့စှကျခငျြတာကတော့ Adidas အမှတျတံဆိပျမှ မဟုတျပါဘူး၊ ဘယျလိုတံဆိပျကိုမဆို မှနျကနျတဲ့ပစ်စညျးကိုဝယျယူမှသာ သူတို့ထညျ့သှငျးထားတဲ့ အံ့မခနျးစှမျးဆောငျရညျတှကေို ခံစားနိုငျမယျဆိုတာပါပဲ။ ဘယျလိုနာမညျကြျောထုတျကုနျမဆို ဒီဇိုငျးကွောငျ့၊ ပါဝငျပစ်စညျးကွောငျ့၊ ဖနျတီးထားတဲ့နညျးပညာကွောငျ့ရယျလို့ သကျသကျကွီး ဈေးနှုနျးမွငျ့နတေယျဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ အဲဒီလိုထူးခွားတဲ့အရညျအသှေးတှကေို တဈစုတစညျးတညျးပေါငျးစညျးပွီး ဘကျပေါငျးစုံပွီးပွညျ့စုံတဲ့ပစ်စညျးတဈခုအဖွဈ အားလုံးဆီအရောကျပို့ပေးထားလို့ သတျမှတျထားတဲ့တနျဖိုးတဈခု ရှိနတေယျလို့ ကြှနျတျောတို့မှတျယူရမှာဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးမှုအတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ၊ နောကျထပျပွီးလညျး အခှငျ့သငျ့ရငျသငျ့သလို အခုလိုမြိုးပို့ဈလေးတှကေို ပခြေျ့မှာတငျဆကျပေးသှားပါ့မယျ။ Adidas ခဈြသူမြားအားလုံး သာယာတဲ့နလေ့ေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။